Robert Mugabe | BlackPressUSA
In this file photo taken Tuesday, Sept. 17, 2013 Zimbabwean President Robert Mugabe inspects the guard of honor during the opening of the first session of the eighth Parliament of Zimbabwe in Harare. Zimbabwe’s longtime President Robert Mugabe says he doesn’t want anyone to be fooled by his impeccable Western style of dress and his precise, teacherly use of English: He is African through and through. “I am not British, I am not a colonial product because I am a complete Zimbabwean, ” he told graduates at Great Zimbabwe University near the remains of the 13th Century walled city, for which Zimbabwe, the former colony of Rhodesia, is named. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi-file)
FILE – In this file photo taken Tuesday, Sept. 17, 2013 Zimbabwean President Robert Mugabe inspects the guard of honor during the opening of the first session of the eighth Parliament of Zimbabwe in Harare. Zimbabwe’s longtime President Robert Mugabe says he doesn’t want anyone to be fooled by his impeccable Western style of dress and his precise, teacherly use of English: He is African through and through. “I am not British, I am not a colonial product because I am a complete Zimbabwean, ” he told graduates at Great Zimbabwe University near the remains of the 13th Century walled city, for which Zimbabwe, the former colony of Rhodesia, is named. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi-file)